के तपाईलाई थाहा छ एक मुखे रद्राक्षको दर्शनले नसोचेको ठाउबाट धन “लाभ” हुन्छ ? “ॐ“ लेखेर शेयर गर्नुहोस ३ दिनभित्र आकस्मिक धनको योग हुनेछ ! जानी राखौ ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Religious/के तपाईलाई थाहा छ एक मुखे रद्राक्षको दर्शनले नसोचेको ठाउबाट धन “लाभ” हुन्छ ? “ॐ“ लेखेर शेयर गर्नुहोस ३ दिनभित्र आकस्मिक धनको योग हुनेछ ! जानी राखौ !
यो फल (रुद्राक्ष) एक मुखे देखि २७ मुखे सम्म भएको बिश्वास गरिन्छ । यो संस्कृतको रुद्र र अक्ष बाट बनेको हो । शाब्दिक अर्थमा यो भगवान शिवको अश्रु जलबिन्दु मानिन्छ । नेपाली शब्दसागर शब्दकोषमा रुद्राक्ष शब्दलाई “लामा-लामा हरिया केशर हाँगामा-फूल सेता हुने स्याउले एक ठूलो जातको रुख र त्यसैको साना ओखर वा तिमिला खाले काँडे फल” भनेर परिभाषित गरिएको छ । रुद्राक्षलाई हाम्रो गाउँघरमा दाना भनेर पनि चिनिन्छ ।